Cram : “Foano ny fambolen-kazon’ny antoko” | NewsMada
Cram : “Foano ny fambolen-kazon’ny antoko”
“Foanana ny fambolen-kazo’ny antoko politika, ny minisitera, ny fikambanana isan-tokony fa harotsaka ao amin’ny kitapom-bola iombonana ny vola vidin’ny zanakazo tiany hovolena isan-taona. Handrindra izany any ifotony kosa ny vaomieran’ny tontolo iainana eo anivon’ny Antenimieram-pokonolona”, hoy ny fanambaran’ny Fiaraha-midinika ho an’ny hoavin’i Madagasikara (Cram), omaly. Nohitsin’izy ireo fa vokatry ny tsy fahaizan’ny mpitondra nifanesy nitantana ny firenena sy ny tsy fihainoana ny hafa ary ny tsy fananan’izy ireo fijery lavitra fa variana tamin’ny fandrobana ny harem-pirenena isan-tokony, toy ny andramena, ny volamena, ny vatosoa, harena an-dranomasina izao ambara fa loza ara-boajanahary mianjady izao… Notsiahivin’ny Cram fa efa nandroso sosokevitra sy tetikasa maty paika momba ny « revolisiona ekolojika » ny Association Analavoatra mba hiarovana ny tontolo iainana, saingy tsy nisy nihaino. Nahamaika ny mpitondra ireo tetikasa nahitana famatsiam-bola avy any ivelany satria misy tombony ho azy ireo izany, araka ny fanambarana ihany.
Navelan’ny mpitondra nahazo vahana ireo tranga voatanisa rehetra ireo satria niteraka tombontsoa ho azy sy ny olom-bitsy miray petsapetsa aminy. “Nihevitra ireo nampindramin’ny vahoaka fahefana tamin’ny alalan’ny fifidianana fa azy sy ny fianakaviany i Madagasikara ka zarainy ho lovan’ny zanany sy ny taranany ary ireo mpiara-miasa akaiky aminy na vahiny na teratany. Tsy rariny izany satria harena nomen’Andriamanitra iombonan’ny vahoaka manontolo tsy misy an-kanavaka izany”, hoy izy ireo.
Zary lasa tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ka tsy nampandroso ny faritra fa nampanankarena olom-bitsy ary niteraka izao loza izao. Manoloana izany, nitondra vahaolana ny Cram ka nilaza fa tokony ho vonona hanova ny toe-tsaina ny mpitondra sy ny mpanao politika. Mila mifarimbona sy mifanome tanana ny mpiray tanindrazana sady sahy handray andraikitra amin’ny fandrasaina an-tanana ny hoavin’ny firenena.
Nambaran’izy ireo koa fa manimba firenena ny fomba fanao politika eto amintsika ka ho lasa endrika ivelany ny fifidianana, mampisikim-ponitra ny Ceni. Ho rava ny firenena satria hiteraka saritaka izany fifidianana sarintsariny izany raha tsy miiova ny lalàmpanorenana ka ho voafidim-bahoaka marina ny mpitondra. “Mitaky fanovana ny toe-tsain’ny mpitondra sy ny rafitra faran’ny haingana izany. Tsy mety ny rafitra nolovaina tamin’ny mpanjanaka. Mila ny fandraisana andraikitra amin’ny famerenana ny hasina ny fokonolona fototry ny firenena », hoy izy ireo.